Ingubo yomzimba ozalwa ngokutsha onodoli abavelisi - China Ingubo yomzimba Ukuzalwa ngokutsha koonodoli Abavelisi, Umzi mveliso
I-ZIYIUI20 50 CM Umzimba wonke S ...
I-22 intshi 55cm njengoPhila ngokuzalwa kwakhona koonodoli
Ubungakanani: 22 intshi / 55 cm. Ubunzima: 1.6 kg. Unodoli ozelwe ngokutsha okhangeleka njengomntwana wokwenene.
Isixhobo: Imilenze yodoli ozelwe ngokutsha yenziwe nge-silicone engeniswe ngaphandle. Umzimba yicotton emsulwa kwaye uthambe kakhulu.
Amehlo: Amehlo aphezulu e-acrylic, anokukhanya, amehlo aluhlaza, ayinyani.
Iphakheji ibandakanya: unodoli * 1, ipacifier * 1, ibhotile * 1, isatifikethi sokuzalwa * 1, iimpahla * 1
I-18 intshi i-48cm yokwenyani yoDoli oZelwe ngokutsha woMfana
Unodoli ozalwe ngokutsha ulinganisa ii-intshi ezingama-18 zeesentimitha (48cm) ukusukela entloko kuye ezinzwaneni, kunye nobunzima be-3.3lbs malunga.
Unodoli ozelwe ngokutsha wayekroliwe ngokuchanekileyo kwi-vinyl ethambileyo yomntwana ukuze ajongeke kwaye azive eyinyani ngokuncamisayo njengosana lwakho lokwenyani.
Izipikili ezizotywe ngesandla ngokupheleleyo, ukuba bomvu kwebhedi yesikhonkwane kunye neenzipho eziguqukayo, kunye nezinye iinzipho zobomi obunobisi obunesiqingatha semilo yenyanga.
Ihambelana neemfuno zokhuseleko ze-ASTM F963 kunye ne-EN71 yeminyaka eyi-3 +.
Ubomi obuzelwe ngokutsha njengoMntwana wooDoli
Unodoli woqobo oyintombazana ozelwe ngokutsha, oonodoli abazalwe ngesandla, ngenkangeleko yokulalisa kunye nembonakalo emsulwa.
Ubukhulu: 20-22 i-intshi, Ubunzima: 2.6-3.5LB. Ubomi obufana nonopopi abancinci bentsana ngomlomo kunye neempahla.
Ulwakhiwo: intloko yesilicone vinyl, 3/4 ii-silicone vinyl ezinamalungu anomzimba we-PP womqhaphu, umntwana onobunzima, ukuthamba okuthambileyo, umzimba womdumba womntwana ongena sini, awunakuhlamba emanzini.
Umsebenzi: Oonodoli abathandekayo abaphila ubomi banokuhlala phantsi kwaye balale phantsi, imilenze iyahanjiswa, unodoli wosana unokulingana kubungakanani bosana olusandula ukuzalwa (0-3m) iimpahla zomntwana.
Ukuzalwa ngokutsha koonodoli beNtombazana entle
Intloko, iingalo ezi-3/4 kunye nemilenze engu-3/4 zenziwe ngezinto ezithambileyo ze-vinyl.
Iinwele zenziwe ngesandla i-mohair. Iinwele zinokuba yiyo nayiphi na imilo kwaye zilungiswe, njengeenwele zokwenyani zosana.
Usana lunamehlo amakhulu anomtsalane, amehlo enziwe ngumgangatho ophezulu we-acrylic, akhangeleka njengamehlo osana lokwenyani, acacile kwaye aqaqambile, ayinyani kakhulu. Amehlo awanako ukuqhwanyaza nokuvala. Abanye bokuzalwa kwakhona
I-ZIYIUI Silicone Soft Lifelike Reborn Baby Baby Doll I-Vinyl yabantwana Isipho seKrisimesi Xmas 24
Ubungakanani boDoli: 24 intshi